दुई महानगरपालिका ब्रुमर किन्ने होडबाजीमा | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
दुई महानगरपालिका ब्रुमर किन्ने होडबाजीमा
विकसित देशका शहरहरुलाई पहिल्यै सफा राखेर धुलोका कणसमेत हटाउन सडकमा ब्रुमर मेसिन चलाइन्छ । नेपालमा भने फोहोरका रास नहटाई सहरलाई धुलोमुक्त बनाउने प्रयास सुरु भएको छ । अनौठो लाग्ने यस्तो अभ्यास राजधानीका दुई प्रमुख सहर काठमाडौं र ललितपुरले थालेका छन्, त्यो पनि जोडतोड रुपमा ।
काठमाडौंको सिको गर्दै धमाधम ब्रुमर किन्न थालेको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जन आधुनिक सहरहरुका लागि ब्रुमर निर्विकल्प साधन बनेको बताउँछन् । ब्रुमरको आवश्यकतामा जोड दिँदै महर्जनले अनलाइनखबरलाई सोधे, ‘बरु, सडक सफा गर्न योभन्दा राम्रो अर्को उपाय छ भने तपाईं बताइदिनुस् न !’
ब्रुमरबारे काठमाडौं महानगरपालिकाको बुझाइ पनि ललितपुरको भन्दा भिन्न छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले यो अत्याधुनिक मेसिनको प्रयोगसँगै अब कुचीकारले सडक बढार्ने दिन सकिएको बताए । ‘हाम्रा सडकहरु ब्रुमर सुहाउँदो नहुँदाचाहिँ अलिकति समस्या भएको छ’, उनले भने, ‘अबका दिनमा ब्रुमरमैत्री सडक निर्माणमा ध्यान दिन्छौं ।’
रातभर ब्रुमरले बढार्नेछ काठमाडौंको धुलो !
दुईवटा चिनियाँ र पाँचवटा इटालियन गरी सातवटा ब्रुमर चलाइरहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले दुईवटा थप्न खरिद प्रकृया अगाडि बढाएको छ । काठमाडौंले चिनियाँ ब्रुमर उपहारस्वरुप पाएको हो भने इटालियन ११ करोड रुपैयाँमा किनेको हो ।
लगनखेल चोक जहिल्यै फोहोरको रासमा निस्सासिइरहेको हुन्छ, त्यसलाई त्यसै छाडेर धुलोको कण बटुल्दै हिँड्नुको के तूक ?
ललितपुर महानगरपालिका पनि के कम, उसले २४ साउनबाट दुईवटा इटालियन ब्रुमर सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसका लागि उसले चार करोड ४८ लाख ११ हजार २८० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
वातावरणविज्ञहरु भने महानगरपालिकाहरुको ‘ब्रुमर होड’ देखेर हैरान छन् । ‘विज्ञ’ मात्र हैन, आम सहरबासीले पनि ब्रुमरमा हुन लागेको लगानीलाई व्यर्थको व्यय मानिरहेका छन् ।
गत बिहीबार ललितपुरको कुपण्डोलमा हिँडिरहेका शिक्षक अनिल बखतीले फोहरको पहाड हटाउन छाडेर धुलोको कण उठाउन तम्सेको देख्दा ‘भनौं भने के भनौं, ढुंगा टिपी के हानौं’ जस्तै भएको बताए । उनले भने, ‘त्यही पाटनको लगनखेल चोक जहिल्यै फोहोरको रासमा निस्सासिइरहेको हुन्छ, ‘त्यसलाई त्यसै छाडेर धुलोको कण बटुल्दै हिँड्नुको के तूक ?’
ब्रुमरले दैनिक १० टन धुलो टिप्दा काठमाडौं कति सफा ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा वातावरण विज्ञान पढाउने मदन कोइराला बाह्रै महिना सडकमा थुप्रिने फोहोर व्यवस्थापन गरेपछि मात्र ब्रुमर प्रयोगबारे विचार गर्न सकिने बताउँछन् । फोहोर र धुलोका सबै स्रोत खुल्ला राखेर ब्रमुर चलाउने कुरा सामान्यतः बुझ्न नसकिने उनी बताउँछन् ।
कोइरालाको बुझाइमा घरघरबाट निस्कने फोहर व्यवस्थापनमा लापरवाही र अव्यवस्थित निर्माण कार्य नै राजधानी सहर फोहोर र धुलाम्य हुनुका प्रमुख कारण हुन् । त्यसपछि कलकारखाना र यातायातका साधनजन्य रासायनिक पदार्थमिश्रति फोहोरले उपत्यकालाई आक्रान्त पारेको छ । कोइराला भन्छन्, ‘यी बेथितितिर आँखा चिम्लेर ब्रुमर खरिदमा हौसिनु भनेको सहजै बुझ्न नसकिने कुरा हो ।’
सक्तैन ब्रुमरले पनि
ब्रुमरले सफा गर्न चिल्लो कालेपत्रे सडक हुनुगर्छ । खाल्डाखुल्डी र फोहोरका टुक्राटुक्री भएको सडकमा ब्रुमरको कुचोले काम गर्दैन । काठमाडौं महानगरका कतिपय ब्रुमर त सडक बढार्दा बढार्दै बिग्रिए । उपत्यकाको अधिकांश सडक ब्रुमरका लागि उपयुक्त छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले गत चैतबाट ब्रुमर लगाउन थालेको पाँचवटा रुट (त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्क, बानेश्वर, रातोपुल र कालीमाटी) अहिले धुलोमुक्त छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
दिनहुँ ब्रुमर लगाउँदा पनि चम्किएनन् काठमाडाैंका सडक !
त्रिविका वातावरण शिक्षक कोइराला सहर सफा राख्ने हो भने सम्बन्धित निकायहरुले गुणस्तरीय सडक निर्माण, पर्याप्त वृक्षारोपण र फोहर व्यवस्थापनमा लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, सडक वा ढल बनाउने, खानेपानीको पाइप वा टेलिफोनको तार बिछ्याउने निकायहरुले समन्वयमा काम गर्दा धुलोका समस्या हल हुन्छ ।
‘घरघरबाट निस्कने फोहर व्यवस्थापन चुस्त बनाए सहर सफा हुन्छ, अझ सफा वातावरण चाहिए त्यसपछि ब्रुमर चलाउँदा हुन्छ’, कोइराला भन्छन्, ‘अहिलेचाहिँ ब्रुमर किन्ने पैसा फोहर व्यवस्थापन, सडक मर्मत तथा कालोपत्रे निर्माण र रुखबिरुवा रोप्ने काममा खर्च गर्दा वुद्धिमानी हुन्छ ।’
महंगो ब्रुमर चलाएर काठमाडौं उपत्यका सफा राख्ने कुरा आफैंमा पार नलाग्ने लहड मात्रै भएको कोइराला बताउँछन् ।
स्वास्थ्य उपचार गरेर फर्किए प्रधानमन्त्री